DEG DEG: Rasaas laga maqlay Aaga Tukaraq & Dhaqdhaqaaqyada Labada Dhinac Ay Wadaan | Puntlandi.ca
Home Puntland DEG DEG: Rasaas laga maqlay Aaga Tukaraq & Dhaqdhaqaaqyada Labada Dhinac Ay Wadaan
DEG DEG: Rasaas laga maqlay Aaga Tukaraq & Dhaqdhaqaaqyada Labada Dhinac Ay Wadaan
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Tukaraq oo ay isku horfadhiyaan ciidamada labada maamul ee Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in laga maqlay rasaas waa weyn oo ay isku ridayeen ciidamadu, gaar ahaana wararka ayaa sheegaya in meelaha qaarkood saaka xiisad colaadeed laga dareemayo.
Puntland iyo Somaliland ayaa xalay ilaa shalay galab sameeyey dhaqdhaqaaqyadii ugu sareeyey, waxayna kala dageen goobo isku muqda, taas oo soo dadajin karta dagaal buuxa oo dhexmara.
Hubka culus oo ay isku ridayaan labada dhinac waxaa laga maqli karaa inta badan magaalooyinka labada maamul kataliyaan, taas oo ka dhigan in la adeegsan doono hub nooc kasta oo uu yahay.
Goobjoogayaal kusugan miyiga goobaha lagu dagaalamayo ayaa sheegay in kasokow saan-saanta dagaal ay goobtan gaarayaan hubabka culus iyo baabuurta gaashaman oo ay kala leeyihiin maamuladan, taas oo iyana uga sii daraysa xaaladda lagu jirro.
Somaliland ayaa qabsatay 8dii bishan magaalada Tukaraq oo ahayd halkii ugu weyneyd ee ay Puntland ka haysatay gobalka Sool, waxaana weerarkaas u muuqday mid ay si weyn u abaabushay Somaliland oo doonaysa in ay sii haysato goobahaas.